Akwụkwọ akụkọ ka na-emebi uru ha | Martech Zone
Wednesday, October 14, 2009 Tọzdee, Ọktoba 15, 2009 Douglas Karr
O ruola mgbe m malitere ịkpọ akwụkwọ akụkọ. Ebe ọ bụ na m si ụlọ ọrụ ahụ bịa, ọ ka dị n’ọbara m, ọ ga-abụkwa na ọ ga-adị. A na-ere akwụkwọ akụkọ mbụ m rụụrụ ọrụ na-ere, akwụkwọ akụkọ mpaghara ebe a na-eku ume ikpeazụ ya. Dị ka ọtụtụ, anaghị m agụ akwụkwọ akụkọ ọzọ, belụsọ na m hụrụ akwụkwọ atụ aro site na Twitter ma ọ bụ otu faili ntanetị nke m na-egwu.
Nke ọnwa a .NET magazine kwuru banyere otu isiokwu dị mkpirikpi banyere Google na micropayments nwere ike ịnwale zọpụta ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ. Ọ dị ka Google etinyela akwụkwọ nkwado na Association nke Akwụkwọ akụkọ America na atụmatụ iji mepụta micropayments. N'ikwu eziokwu, echere m na nke a bụ echiche jọgburu onwe ya. Akwụkwọ akụkọ online Agụ akwụkwọ anaghị eme nke ọma - yabụ ekwetaghị m ịrịọ penny ma ọ bụ abụọ bụ azịza ya.
Akwụkwọ akụkọ na-ahụ ụzọ maka uru ha bara. The free press nwere a yi akụkọ ihe mere eme na obodo a… ruo 40% uru oke maka squeezing mgbasa ozi n'akụkụ ọ bụla nke akwụkwọ mere. Gaa n'ọnụ ụlọ akwụkwọ akụkọ ọ bụla na mkparịta ụka ahụ gbasara ntinye ego mgbasa ozi na otu esi edobe ink na osisi ndị nwụrụ anwụ maka uru. Gaa na akwụkwọ akụkọ ọ bụla na ọ bụ ihe niile gbasara otu esi egbutu ndị ọrụ, belata ụgwọ ọrụ ọhụụ, yana - naanị ugbu a - otu esi amalite inweta uru na ntanetị.
Enweghị ihe ọ bụla n'ime mkparịta ụka ndị a bụ ezigbo onyinye nke ndị nta akụkọ maka igwu ala miri emi na ide ederede ederede nke mere ka ndị mmadụ nwee obi ụtọ ma debe ọchịchị onye kwuo uche anyị. Afọ ole na ole gara aga, ekwuru m ya ire ozi akwuola… Ana m echegharị ugbu a.
Nke a bụ ndụmọdụ m nye akwụkwọ akụkọ:
Adịla erere ndị gụrụ ya ọdịnaya gị. Kama, ree ọdịnaya gị na portals, weebụsaịtị, na azụmaahịa. Hapụ weebụsaịtị ka ha chọta ma mịchaa ozi ha chọrọ igosipụta, nye ha ohere iwebata ọdịnaya ha na saịtị nke ha, ma nye ha ohere iweta ya otu ha chọrọ ya si gosipụta… na ọnụ ahịa.
Akwụkwọ akụkọ nwere ike bụrụ ndị mgbasa ozi mgbasa ozi dị mma kemgbe ọtụtụ afọ, mana ọ dị ha mkpa ịlaghachi na mgbọrọgwụ ha - na-enye ndị ọdịnaya nwere oke ọdịnaya ọdịnaya na mpaghara ha dị ukwuu.
Usoro nke ịkọ akụkọ site n'echiche iji bipụta bụ usoro dị ịtụnanya nke, n'echiche nke m, emebiwo n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Akwụkwọ akụkọ dị mkpa ịlaghachi na mgbọrọgwụ ha ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịdị ndụ. Hapụ ndị nta akụkọ ka ha mee onwe ha aha, kwụọ ha ụgwọ maka arụmọrụ ha, kwe ka ha bụrụ kpakpando. Nke a apụtaghị na ndị nta akụkọ ga-ere mkpụrụ obi ha… ha ghọtara mkpa ọ dị inwe aha dị ọcha.
M ga-onwe ya n'anya ịgbakwunye ọdịnaya na Martech Zone nwere ọdịnaya site na ndị odeakụkọ ọkachamara nke mere na isiokwu na ọdịnaya dị obosara na miri emi… mgbe ị na-akwụ ụgwọ ụgwọ.
Ndị na-anọghị na ụlọ ọrụ ahụ ahụlarị ohere. Enyi Taulbee Jackson amalitela Ọrụ Raidious Digital Content Services, na ụlọ ọrụ ya na-agbaziri ma usoro ma talent si ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ. O doro anya na akwụkwọ akụkọ mpaghara mere otu isiokwu na mmalite.
Enweghị m n'aka ma ọ bụrụ na olileanya ọ bụla dị maka akwụkwọ akụkọ iwepụ onwe ha n'ọdụ a. Ọ ga-adị m mma asị ịhụ ka talent nke otu ndị a ga-efu, n'agbanyeghị. Nnukwu ọdịnaya siri ike ịchọta taa - ya mere ọ dị mkpa maka ịchọta ọkaibe na ndị na-elekọta mmadụ. Akwụkwọ akụkọ nwere ike idozi ọdịiche ahụ, debe ikike ha, wee laghachi na ịba uru.
Tags: azụmahịa vidiyocazoomionye nnọchiteanya nkwado ndị ahịaakụkọ ihe mere eme nke infographicssụọ ngọngọmmekọrịta
Ọkt 15, 2009 na 1:46 PM
Echere m na ị kwadoro nke a. Industrylọ ọrụ akwụkwọ akụkọ bụ (ma kwesịkwa ọzọ) na azụmaahịa akụkọ, ọ bụghị azụmaahịa mgbasa ozi. Gini mere ị ga - eji tinye ihe ha nwere - ndị nta akụkọ - nye ha akụrụngwa maka ire ahịa ha. Modeldị ahụ ga-adị ka ndị na-ahụ maka ụlọ na-ejikọ ụlọ ọrụ ụfọdụ.
Curt Franke, BitWise Ngwọta
Ọkt 16, 2009 na 12:49 PM
Say sị na akwụkwọ ọgụgụ n'ịntanetị na-agụ "anaghị eme nke ọma." Dabere na Quantcast:
NYTimes.com -> 45th họọrọ saịtị
LATimes -> 110th họọrọ saịtị
SFGate.com -> saịtị 133rd họọrọ
WashingtonPost.com -> 152nd họọrọ saịtị
NYDailyNews.com -> Ebe nrụọrụ weebụ 160th
N'iburu n'uche na ndị a bụ saịtị mpaghara (ọ bụ ezie na ndị a nwere mkpesa mba), na ịtụle ọkwa ndị a na-emegide saịtị dịka facebook, google na yahoo, m ga-asị na ndị na-agụ akwụkwọ dị mma. Ike ha nwere monetize bụ ajụjụ dị iche iche.
Ọkt 19, 2009 na 3:31 AM
@Halwebguy ọkwá bụ foto, biko lee anya na ụlọ ọrụ ndị a. Oge ọ bụla agbadoro na 2009 ma ọ bụ naanị n'oge na-adịbeghị anya ọ malitere ịmalite ịgụ akwụkwọ n'ịntanetị. Latimes ewepụghị n'afọ gara aga. SFGate abụrụla afọ abụọ. Washingtonpost.com n'ezie wedara ala n'afọ gara aga. NYDailyNews.com bụ naanị nke na-egosi na ọ na-eto nke ọma.
Buru n'uche na ịdọpụta saịtị ole na ole anaghị akọ akụkọ banyere ụlọ ọrụ dum, agbanyeghị! M na-agụ ụfọdụ n'ime saịtị ndị a ị na-agwa… mana m na-eme ya n'ihi na m kagburu akwụkwọ mpaghara ahụ ma kwụsị ịgụ ya kwa ụbọchị. N'ozuzu, ndị na-agụ akwụkwọ akụkọ n'ịntanetị na-aga n'ihu ịjụ.